Our Paediatric lecturer Sayargyi U Bo Htut | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeOur Paediatric lecturer Sayargyi U Bo Htut
Our Paediatric lecturer Sayargyi U Bo Htut
Yin Yin added3new photos — with Khin Khin Gyi and Nyan Htun.
March 25 at 3:15pm ·
Child ward ကဆရာကြီးဦးဗိုလ်ထွဋ်ကို သွားကန်တော့ ခဲ့ကြပါတယ်
We have met Sayargyi U Bo Htut in KL. He had visited our house. His daughter was in UKM Anatomy (KL) and later transferred to Singapore.
89You, DrWinwin Myint, Khin Htay Kyi and 86 others
Ba Maw ဆရာကြီးကလည်းငါတို့ထက်အရွယ်ပိုတင်။
Like · Reply · 1 · March 25 at 5:49pm
Yin Yin ဟုတ်ပါ့ကွယ်
Like · Reply · March 25 at 9:10pm
Ko Naing ဆရာကြီး ဆီကနုပျိုဆေးနည်းရခြင်ပဗျာ။
Like · Reply · 1 · March 25 at 6:54pm
Yin Yin ဘယ်နေလိမ့်မလဲကွယ်မေးထားပါတယ်သိချက်ရင်ကြိုတင် ငွေအသပြာတင်၍ booking လုပ်ထားပါ
Like · Reply · March 25 at 9:12pm
Sweswe Thaw မန်းလေးဆရာတွေရဲ့အားသာချက်က လောဘ ဒေါသ မောဟ နဲလို့ပါဘဲ သူတို့ရဲ့မေတ္တာစေတနာတွေအကျိုးပေါ့
Unlike · Reply ·2· March 25 at 10:05pm
Khin Su Mar ဆရာ့ပုံကိုတွေ့မြင်၍ဝမ်းသာရပါသည်။
Unlike · Reply ·2· March 26 at 2:28pm
← U Kyi Maung, my Burmese (Myanmar) lecturer at 1st. M.B.,B.S. Junior class
OGဒေါက်တာဒေါ်ခင်မြင့်ဆွေနဲ့အရင်က Physio: and X Ray ကဆရာကြီးဦးမြင့်ကြူး →